﻿ सुबिसुले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर ‘एक लाख सम्मको स्वास्थ विमा निःशुल्क’
सुबिसुले ल्यायो नयाँ वर्षको अफर ‘एक लाख सम्मको स्वास्थ विमा निःशुल्क’
इटहरी । नेपालको सुचना तथा संचार क्षेत्रमा अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबलनेट प्रा. लि ले नयाँ वर्षको अवसरमा ग्राहकहरुका निम्ति “इन्टरनेट मस्त जीवन स्वस्थ” अफर ल्याएको छ ।
इन्टरनेट मस्त जीवन स्वस्थ अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुलाई रु. एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ विमा प्रदान गरिने भएको छ ।
स्वस्थ जीवनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले इन्टरनेट तथा इन्टरनेट र क्लियर टिभि सेवाको नयाँ जडान तथा नबिकरणमा रु. एक लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने भएको बताइएको छ ।
शिखर इन्स्युरेन्ससँग स्वास्थ विमाको लागि सहकार्य गरेको यस कम्पनीले नेपाल र भारतमा उपचारार्थ ग्राहकहरुलाई रु. एक लाख सम्मको स्वास्थ्य बिमाप्रदान गर्ने भएको हो । सिमित अवधीका लागि सञ्चालनमा रहेको यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा पर्न जाने आर्थिक भारलाई धेरै हदसम्म निर्मुल पार्ने विश्वास कम्पनीको रहेको छ ।
सुबिसु केबलनेट (प्रा.) लि.ले केबल तथा डिजिटल टिभी सेवा, कन्जुमर इन्टरनेट, इन्टरप्राइज इन्टरनेट, एम.पि.एल.एस भि.पि.एन.एस, व्यानएथर्नेट, होलसेल आइ.पि ट्रान्जिट, एम.भि.पि, डाटा सेन्टर सोलुसन जस्ता मनोरञ्जनात्मक सेवा तथा बिजनेस सोलुसन नेपालमा प्रदान गर्दै आएको छ ।